Prebua uPawulu: Filmography kanye biography
Umsebenzi umlingisi kubhekwa omunye ethandwa kakhulu emhlabeni, njengoba abaningi iphupho amaholo aphezulu, ngakho-ke ufika ezikoleni yaseshashalazini kanye nezinye izikhungo zemfundo phezu ubuhlakani oqondisa, nokunye okunjalo. Nokho, abaningi ngisho nokuwabona kangakanani namanje kunzima ukukhetha mkhakha womsebenzi. Akuyona indaba yokuthi nje ukudubula ngesikhathi esingafanele, nezinye izinkinga ezifanayo, ngoba ngokuvamile uqale-abadlali nje abakwazi ukufinyelela ezingeni ezidingekayo ukuze uthole hhayi okubi. Ngaphezu kwalokho ukuba umlingisi omkhulu, futhi ukwenza kuphela amabhayisikobho engcono, kubalulekile ukuba abe nesifiso ukuthola inkokhelo hhayi ephakeme nesipiliyoni eliyigugu. By the way, kulesi sihloko emfushane sizoxoxa umdwebi odumile emhlabeni.
Prebua uPawulu - yaziwe ubuntu emhlabeni, nomdlali unqambothi, owazalelwa eFrance. Kulesi sihloko sizobe ukukhuluma biography kanye Filmography ezivelele professional futhi nixoxe okwengeziwe kufanele enzeni ngokuphila kwakhe. Masiqale!
Prebua uPawulu wazalwa ngoFebhuwari 21, 1927 Marseille, France. Le ndoda yayihlale hhayi kuphela umlingisi omkhulu kanye yamabhayisikobho, kodwa futhi umsakazi kanye lokuqala rate yosomahlaya. Cishe 14 iminyaka, le nsizwa yaba jockey, wasebenza Awe-Steeplechase. Ngemva kwesikhathi esithile le umlingisi esizayo waqala abasebenza kwelinye inkampani encane ku zomshwalense wezenhlalo, futhi ngesikhathi Okwesibili kweMpi Yezwe Prebua uPawulu kaningi lwenziwa izibhedlela eateries ngenkathi kwenziwa iculo kusukela repertoire ubuntu owaziwa ezifana Fernandel futhi Noel -Noel.
Futhi uzinake ukuthi abadumile ngempela ngesikhathi umlingisi Anri Kremo kanye abamenyiwe ingxoxo namuhla, indoda enhloko-dolobha French. Kunengqondo ukuthi Prebua uPawulu wavuma futhi waya eParis, futhi ngemva kwesikhathi esithile lapho wakwazi ukuba abe nomdlali waseshashalazini.
A okunhlobonhlobo amafilimu ibonisa ukuthi isiqongo esemqoka ye-career kule filimu phakathi 1948 no-1992. Phakathi nalesi sikhathi, le umlingisi wathatha ingxenye kumafilimu okungenani 100. By the way, liphinde Kuyaphawuleka ukuthi le ndoda engcono uyakwazi ukudlala izindima yamahlaya, ne plan yesibili, okuyinto uhlobo indima yakhe.
Ngaphezu kwalokho, phakathi nenkathi kusukela ngo-1950 kuya ku-1960 futhi kamuva Prebua uPawulu iqhaza ezihlukahlukene nomsakazo.
I last ambalwa eminyaka, indoda omhlaba ihlonishwe Ziyaqhubeka zenza kumafilimu futhi ngesikhathi esifanayo kaningi uvele emsakazweni. Ukuze uthole ulwazi oluningi Filmography we ndoda okuxoxwa namuhla, sizoxoxa ngemva kwesikhashana, futhi manje-ke Kuyaphawuleka ukuthi wafa ngo-1997, lapho eneminyaka engu-70 ubudala. Usuku olusemthethweni lokufa 4 Mashi. Lo mlingisi is wangcwatshwa emathuneni ngokuthi Couilly-Pont-aux-Dames eduze edolobheni elincane, lapho ayehlala khona eminyakeni yakhe yokugcina.
Filmography. ingxenye 1
Phakathi kwenkonzo yakhe ende, Pol Prebua kabani amafilimu manje ukuyibuka izigidi abathandi movie ezivela emazweni ahlukahlukene, njengoba kumdlali izinkanyezi ku 133 opholile, kodwa kulolu hlu akubandakanyi labo amabhayisikobho kanye uchungechunge TV, lapho credits umlingisi elingaziwa.
Kulokhu-ke kubalulekile ukuba ukhethe omunye wemisebenzi yokuqala ngaphansi kwegama "ubusosha Roussel" ngo-1954. Futhi uzinake iyona amafilimu 'ngeSonto Killers "," u-Eliza "," Ivanov "," Kule minyaka 5 amaminithi "" Sicily "," ikhekhe "," Anti UCharley sika "," Izinswelaboya, "" uCroesus "," Sirano De Berzherak " , "flying udokotela", "izono ezinkulu eziyisikhombisa", "Tartarin ka Tarascon."
Filmography. ingxenye 2
Ngaphezu kwalokho, yena ngqo iqhaza kumafilimu ezifana "Ukufa nababulali," "Impelasonto e Zyuydkotene", "Gorilla", "eyikhulu izicucu futhi zidwedwe," "Domo ezinkulu", "uMbuso unogwaja", "Misadventures Chinese China "," Indawo yokudlela uMnu Septima "," ukuhamba Big "," the Old Man nengane "," the Adventures of indlu yezwe, "" Idiot e Paris, "" i ngendoda eyayinikeza mafia, "" Oscar, "" indlu imali "" Madman kusukela lab 4 "," Ngizothatha ekhaya "," eqandisiwe "," Manje, fly! "," umalume Benjamin "," umuntu-orchestra "," iphoyisa eholidini, "" Izincwadi ezivela m yami Elnitsa "," Vumela imisindo le-waltz "," Isikebhe phezu Utshani "," Hamba kancanekancane, le bass! "," Ophezulu on a esihlahleni "," Joe "," Megalomania "," Konke kuhamba kahle, yonke into enhle, "" Misadventures Alfredo " "clover namahlamvu emihlanu", "Crazy ku enkundleni", "Madoda kancane ethule kakhulu", "exokozelayo", "Ngifuna lona ugogo," "isizathu uhlanya kakhulu."
By the way, asikwazi bayakhohlwa ifilimu "Awu! Uma indela ucela ... "," ukugqwala lokugcina Paris "," ilayisense yokushayela "," AmaShayina Paris "," embhedeni Mad "," Amathambo e wokusika yemifino "," ukuzijabulisa okuhle "," Ukuze sobabili "," Usuku Omangalisayo "" Amanye "," intombazane cool "," omkhulu aqondisa, "" Kwenziwe ikota ezimbili BC "," u-Emir uncamela blondes "," develi "," Freedom "," Ukulingana "," sauerkraut " "izithukuthuku Cold", "indaba enhle", "usuku Crazy noma Ukuhlanganiswa Figaro" kanye nabanye abaningi.
Lapha esixoxe umuntu ezifana Pol Prebua. Filmography, biography ngempela kakhulu abalandeli yalesi umlingisi, ngakho lonke ulwazi ezithakazelisayo kakhulu okwethulwa kulesi impahla.
Khetha noma iyiphi amafilimu akhethiwe namuhla! Happy wokubuka!
Svetlana Zeynalov - Biography, umndeni, izithombe
Mishel Montinyak futhi supply yayo indlela
Igama indodakazi agutin? isithombe
Izinga eliphezulu lomsebenzi
Indlela yokwenza ukuba nokhalo oluncane ekhaya?
Indlela ukuthatha imoto ukuze iqashwe. Indlela ukuqasha imoto e "Taxi"
United Nations: usomqulu. United Nations Day
Kungakhathaliseki noma cha ukuthenga zamadola manje, noma kanjani imali yakho kusuka izinga lokwehla kwamandla emali?